Izindaba - Ungazikhetha Kanjani Izembatho Zangaphandle Ezingcono kakhulu?
Ukuphuma ebusika, izindawo ezahlukahlukene, izikhathi ezahlukahlukene, imigwaqo ehlukene, iminyaka ehlukene, ukukhetha izingubo zangaphandle kuhlukile. Ngakho-ke ukhetha kanjani?
1. Yazi lezi zimiso ezintathu
Kusuka ngaphakathi kuye ngaphandle, yilezi: ungqimba lomjuluko-ungqimba lokushisa-ungqimba ongangeni umoya. Ngokuvamile, isendlalelo sokucwayiza izithukuthuku yisiketi sangaphansi noma isikibha esoma ngokushesha, ungqimba olufudumele uboya, kanti ungqimba olungangenwa umoya yijakhethi noma ibhantshi eliphansi. Ukuhlukaniswa okunengqondo kwalezi zingqimba ezintathu kunganelisa imisebenzi eminingi yezokuvakasha ngaphandle. Eminyakeni yamuva nje, kuvele amanye amabhantshi amasha we-softshell. Lokhu futhi kuyisinqumo esihle, futhi sinezici zemfudumalo nomoya. Ungagqoka eyodwa ngaphezulu.
2. Khetha izingubo zakho ngokwesikhathi nomzila
Umgomo wezingubo ezintathu zezingqimba umgomo oyisisekelo wezemidlalo yezemidlalo yangaphandle. Ngaphezu kwalokho, izingubo kufanele zengezwe ngesikhathi ngokwesimo sangempela. Uma uzonyuka isikhathi eside, letha ijakhethi ephansi. Lapho umasha esikebheni, ungahle ungazizwa ubanda kakhulu ngenxa yokujuluka, ukuzivocavoca umzimba nokushisa komzimba. Ngalesi sikhathi, ungagqoki phansi amajakethi uze uphumule emgwaqeni noma ukanise ukuze kugcinwe izinga lokushisa.
3. Khetha izingubo ezifanele iminyaka ehlukene
Abantu beminyaka eyehlukene bagqoka ngokungafani uma bephuma. Lapho asebekhulile bedlala imidlalo yangaphandle, kufanele bagqoke izingqimba eziningi ngangokunokwenzeka ukuze bafudumale. Izingubo ezinoqweqwe oluningi zinamandla okulondoloza ukushisa okunamandla kunezingubo eziwungqimba olulodwa. Ngaphezu kwalokho, bangakhumula izingqimba eziningana zezingubo lapho bezizwa beshisa ngesikhathi sokuvivinya umzimba. Uma ungafuni ukugqoka izendlalelo eziningi zezingubo, ungakhetha uboya kanye nejakhethi yezemidlalo enezingcezu ezimbili noma ibhantshi elinamaphiko lomoya. Zama ukungagqoki amajezi namabhantshi phansi ngesikhathi semidlalo yangaphandle, ngoba amajezi akulula ukuwomisa emanzini futhi ayasinda. Amabhantshi aphansi afudumele kodwa awaphefumuli.
Izingane azidingi ukugqoka izingubo zangaphansi ezijiyile ezishisayo kungqimba lwangaphakathi olungaphandle. Izimpahla zangaphansi zikotini ezijwayelekile zanele. Isendlalelo esifudumele singagqokwa ngejazi le-cashmere + ivesti le-cashmere noma ijakhethi encane enephedi.